Marzipan achave aripo pane ino shanduro yeWWDC 2019 | Ndinobva mac
Marzipan achave aripo pane ino shanduro yeWWDC 2019
Uye ndeyekuti Apple inoenderera ichishanda kuita kusimudzira kwe muchinjikwa mafomu pakati peApple, iPad uye Mac zvishandiso. Chirongwa ichi, icho chinotarisirwa kutanga kubereka michero mukati megore rinotevera 2021, chingave chiripo mune yakakosha yakanangana nevakagadziri vemwedzi waChikumi.
Mark Gurman anotsigira izvi mune Bloomberg svikiro, maanotsanangura kuti vakomana veCupertino vanogona kuburitsa rumwe ruzivo nezve iyi nzira yekubatanidza kuvandudzwa kwemaapps eakasiyana OS yekambani. Izvi zvinoreva zvinhu zvakati wandei uye chimwe chazvo zviri pachena kuti Apple ditch Intel processors muMacs uye enda kune maARM ndosaka tichiti chinhu chinotora nguva.
Marzipan, inova ndiyo nzira inozivikanwa chirongwa ichi kubva mukati meApple, chaisazove chinhu chinobatanidza OS yeMac ne iPhone, iPad sekuda kwakawanda. Izvo zvinozobvumidzwa nechirongwa ichi ndechekuti vanogadzira havafanirwe kugadzira maapps eMac App Store uye neApple App, kuitira kuti zvinzwisisike zviri nyore gadzira iyo kodhi yakafanana kune ese Apple maapp.
Zvese izvi zvichiri kure nhasi uye zvinotarisirwa kuti isati yatora nhanho iyi kambani ichaita bvunzo dzakawanda kusanganisira nesarudzo yekushandisa nzira mbiri dzekuvandudza kweapp kwenguva uye kudzikamisa mune imwe chete. Izvo zvinoita sezviri pachena ndezvekuti isu tichava nedzimwe nhau nezvazvo muWWDC ino, ndosaka zvakataurwawo kuti tichava neruzivo rweMac Pro mune ino WWDC uye ndizvo uku "kubatana" kunoenderera mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Marzipan achave aripo pane ino shanduro yeWWDC 2019